musha nyika dzakabatana Hollywood nyeredzi Sylvester Stallone Childhood Story Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nhoroondo Yakakwana yeAmerican muimbi anonyanya kuzivikanwa se “Pusa". Our Sylvester Stallone Childhood Story pamwe neS Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvakakurumbira kubvira paudiki hwake kusvika panguva. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nyaya yehupenyu pamberi mukurumbira, mhuri yemhuri uye hupenyu hwehupenyu hwake. Kunyanya zvakadaro, mamwe OFF uye ON-Screen zvishoma zvinyatsozivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva yekutungamira kwake kuDheyy uye Rambo film series. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Sylvester Stallone's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Sylvester Stallone Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Kutanga kubva, Michael Sylvester Gardenzio Stallone akaberekwa musi we 6th waJuly 1946 paGehena's Kitchen muNew York, United States.
Akazvarwa kuna amai vake Jackie Stallone uye kuna baba vake Frank Stallone Sr.
Mugari wemuAmerican wedzinza reItari neFrench Breton midzi yakaumbwa zvakakwana mudumbu raamai vake asi haana kukura kuti ave murume akanaka akanaka. Izvi zvinokonzerwa nenyaya yekuti divi repazasi pechiso chake rakarwara mitezo sevamiriri vezvekuzvara vakamudhonza kubva mudumbu raamai vake vachishandisa mapaipi emasimba.
Somugumisiro, akakurira nema droopy meso uye slurry inzwi asi zvisinei akatarisana nehupenyu musoro.
“Ini handisi tsvarakadenga yechinyakare. Maziso angu akadonha, muromo wangu wakakombama, mazino angu haana kutwasuka, izwi rangu rinonzwika semutakuri wepfuti weMafioso, asi neimwe nzira zvinoshanda. ”
Yakataura makore eStallone gare gare.
Mutevedzeri wekuita basa akapedzisa makore ekutanga e5 ehupenyu hwake mukuchengetedza bhodhi asati adzokera nevabereki vake mumhuri yavo ine utsinye. Mhuri yaStallone yakabva yadzokera kuMadganine kuWashington apo baba vavo Frank vakatanga imba yakanaka.
Yaiva Maryland kuti Stallone akakurira pamwe nemukoma wake Frank. Hupenyu hwakanga husisiri mubhedha wemaruva yaStallone nemukoma wake wemukomana uyo akapupurira kuwanda kwekuputsika pakati pevabereki vavo, pakuguma kwekurambana apo Stallone aiva nemakore akakura 9.
Stallone akagara nababa vake kwemakore mashomanana mushure mekurambana asati asangana naamai vake vakaroorwa zvakare muPhiladelphia.
Sylvester Stallone Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Dzidzo neKubata Buildup
Stallone akarwisana nedzidzo mune zvikoro zvakawanda nekuda kwekushaiwa kwekutarisira kwakanaka kwevabereki uye akavakirwa nevezera vekuchikoro vaimuseka. Iye, zvakadaro, akatanga kunyora chiitiko chikuru pashure pokunge adzoka zvakare naamai vake kuPhiladelphia ndokunyora kuNorte Dame Academy.
VERENGA Arnold Schwarzenegger Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Kwapedza zvidzidzo zvekudzidza akaona Stallone achifambira mberi kuLincoln High chikoro, Charlotte Hall Military Academy pamwe neAmerican College muSwitzerland uye Yunivhesiti yeMiami apo vose vari vaviri vakadzidza mutambo.
Sylvester Stallone Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Road To Fame
Stallone, paakapedza kudzidza kuchikoroji, akaenda kuNew York kuti aite basa rekuita.
Paainge akamirira basa rake kuti aparadze akashanda mabasa akawanda asinganzwisisi kusanganisira kuchenesa zvivhara zvehumboni panzvimbo yepakati ye zoo, kushanda somubatsiri pane imwe yemitambo yemavhidhiyo uye kuifungidzira zvose, yakagadzirirwa mufirimu yekodha yakawanda yakatumidzwa Sangano paKitini neVadzidzi (1970).
Akazoita mabasa mashomanana mune mamwe mafirimu asina kumubatsira kusvika pakuwana mukurumbira kana kuvandudza mari yake yokukurumidza kuderera.
Sylvester Stallone Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Simuka Mukurumbira
1975 ndiyo gore iro Stallone akashungurudzika akamutsa munyori wechirindi maari mukati mushure mekutarisana nharo yebhosi pakati paM Muhammad Ali uye mubati wechikwata chinonzi Chuck Wepner.
Mutambo wakafemera Stallone kuti anyore script ya "Rocky" mumazuva matatu mushure maizvozvo akatsvaga vagadziri kuti vaite chirongwa ichi vachimushandisa semunhu wepasi pemboro anotungamira mutambi. Pakupedzisira akawana mugadziri uyo akasiyana nevamwe, kana kuyedza kutenga iyo script kana kuda mutambi anozivikanwa kuti atambe chinzvimbo chekutungamira.
"Rocky" yakatorwa mu1975 uye ikaburitswa muna 1976. Iyo bhaisikopo yakaratidza kubudirira mune zvekutengeserana, yakachengetedza mazita mazhinji ezvidzidzo, yakahwina mibairo uye yakasimbisa Stallone semukurumbira mutambi uye director.
Sylvester Stallone Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu
Stalone yave ichiroorwa katatu tinokuendesa mashoko pamusoro peukama hwake hwekare uye hwemazuva ano, kutanga nemuchato wake wekutanga kuSaha Crack.
Stalone naSasha vakaroorana muna 1974. Yaiva Sasha uyo akasimudza kurwa kwaStallone asati atanga kubudirira muRoyy makore maviri gare gare.
Kuroora kwevakaroorana kwakakomborerwa nevana vaviri vasati vaparadzana makore gumi gare gare. Vana vanosanganisira:
1. Sage Moonblood Stallone (akazvarwa 5th May 1976). Akanga ari mutambi uye anotyisa firimu distributor kusvikira afa nguva isati yasvika paakanga akwegura 36.
VERENGA Tom Cruise Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi
2. Seargeoh Stallone (akazvarwa 1979). Ndiye mwana wechipiri waStallone uye akaonekwa aine autism paakanga akura 3. Nekuda kweizvozvo, anorarama hupenyu hwakavanzika uye kwete zvakawanda zvinozivikanwa nezvake.
Kufambira paStallone akaroora Brigitte Nielsen kungomuramba iye makore maviri gare gare. Hapana mwana akazvarwa mumubatanidzwa.
Imba yechitatu yemutambi yaive mubatanidzwa wake naJennifer Flavin muna 1997.
Muchato wavo unokomborerwa nevana vatatu. Dzinosanganisira:
1. Sophia Stallone (akazvarwa 27 August 1996). Iye ndiye mwanasikana wokutanga akaberekerwa kumhuri. Vaya vachangopedza kudzidza veYunivhesiti yeSouth California vanoda mabhuku uye mafirimu.
2. Sistene Stallone (akazvarwa 27th Chikumi 1998). Iye muenzaniso uyo akambotsanangurwa naVogue se "nyowani kumeso yekutarisa".
3. Pakupedzisira asi kwete kwete zvishoma Scarlet Stallone (akazvarwa 25th May 2002). Scarlet ndiye mwana weimba uyo anowirirana zvakafanana nababa vake.
Sylvester Stallone Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri
Stallone akaberekerwa mumhuri yevana. Tinokuudza mashoko echokwadi nezvehupenyu hwemhuri yake.
Nezve baba vaStallone: Francesco "Frank" Stallone Sr ndiye baba vemutambi. Akanga ari mupikisi anofarira uye munyori aishanda somuchengetedzi wevhisi uye mutambi.
Frank akaroora zvine utsinye naamai vaStallone, Nekuda kweizvozvo, Stallone akapedza makore mashanu ekutanga ehupenyu hwake kurera kure kure nemutambo wavo.
Vakarambana pasina nguva refu naFrank vachiroorwa nevakadzi vaviri (Rose Marie Stallone naK Kathleen Rhodes) vasati vafa pazera re 91.
Nezve amai vaStallone: Jackie Stallone ndiye amai vemutambi. Iye ari nyanzvi yekuongorora nyeredzi uyo aishanda semutambo uye mutsigiri wekumhanya kwevakadzi.
Mushure mokunge uchinge wawa kubva mumhuri yake yekare, Jackie akaroorwa naAnthony Filiti uyo aive nemwanasikana naye.
Nezve Stallone's Siblings: Stallone ane vana vomunun'una 4. Dzinosanganisira:
1. Frank Stallone Jr: Ndiye munin'ina waStallone akaberekwa nevabereki vamwe chete. Frank kazhinji muimbi ane kufarira kuita uye kuunganidza kwetsiva nhoroondo.
2. Toni Ann D'Alto: Ndiye mwanasikana akazvarwa naamai vaStallone wechipiri muchato naAnthony Filiti. Toni aive mutambi uye akapindwa muropa nezvinodhaka kusvika pakufa kwake kweLung Cancer muna2012.
3. Chinyanyozivikanwa pamusoro Carla Francesca Stallone Benzi uyo akaberekwa naFrank Sr. wechipiri muchato naRose Marie Stallone.
VERENGA Johnny Depp Yevacheche Nyaya yeNhau uye Untold Biography Chokwadi
4. Dante Alexander Stallone muenzaniso uye mudiki pane veStallone. Iye akazvarwawo nemuchato wechitatu waFrank naKathleen Rhodes.
Sylvester Stallone Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Untold Career Facts
Stallone achida basa mumabhaisikopo akaona kuti anotambura kukuvadzwa kwakawanda kusanganisira mutsipa wakaputsika wakagadziriswa nekuiswa kwesimbi yesimbi.
Akangotarisa mumabhaisikopo maviri asina kumuona achitamba "akaoma nzungu mabasa". Iwo mafirimu anosanganisira 'Pamusoro pePamusoro' (1978) pamwe ne 'Tango naCash' (1980).
Stallone akapihwa "cinematic kubudirira mumutambo wetsiva neBoxing" Vanyori Sangano reAmerica uye akaendeswa zvakare muBoxing Hall of Fame muna 2011 pamwe naMike Tyson kunyangwe vasina kurwira mumakwikwi echokwadi etsiva.
Akambotanga kupinda muBhizinesi reMagazini pamwe nezita rinonzi Sly. Magazini iyo yakanga yanyora kubva kubva kune mazano ezvehutano kune vekukurukurirana kwevanhukadzi yakambovapo kwenguva pfupi zvikuru nemibvunzo mina chete.
Zvinonyatsoratidza kuti mutambi uyo akashandisa zvizhinji zvepfuti mumafirimu ake zvinopesana nehupfumi hwevanhu vemazuva ose nekuda kwekuti akarasikirwa neshamwari yake, mutambi Phil Hartman kune pfuti inouraya.
Sylvester Stallone Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Personal Life Facts
Stallone ane zvirevo zvinotevera kumunhu hwake
1. Stallone anoda kupora.
2. Iye ari claustrophobic uye anotya nzvimbo dzakakwirira.
3. Chikamu chechipfuva chake chinowedzera mvumbi nokuti akabvarura imwe yepectoral muscle paanenge achiedza kuratidzira kuti anoshanda panguva yebheni-pressing contest.
Sylvester Stallone Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Life Style
Stallone ndiye muridzi anozvikudza weBeverly Hills Mansion inokwana $ 10 Million iyo inoratidza kubudirira kwake sechokupedzisira chiito hero yeHollywood.
Imba yacho yakashongedzwa nemotokari dzemotokari dzinosanganisira Mustang GT, Hendricks Camaro SS, Ferrari 599 GTB Fiorano, Black Ferrari 612 Scaglietti, Bentley Continental GTC uye Mercedes SL65 AMG Black Series.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Sylvester Stallone Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!